မျောတာ နှငျ့ မီးအားပေးစကျမြား
Items 1 to 16 of 1100 total
Hoco ES6 Bluetooth
Hoco ES6 Bluetooth လေးဖြစ်ပါတယ် ဒီES6 Blt လေးကဆိုရင်sillicon cazinနင့်ပြူလုပ်ထား သည့်အတွက်အလွယ်တကူကြိူးခေါက်ခြင်းမရှိပါဘူး Magenetic Systemနင့်ပြူလုပ်ထား၍Incoming Call ဝင်တဲ့အခါတွင်လဲအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ရန်အတွက် Vibrate Systemပါဝင်ပါသည်။Incoming Call ဝင်တဲ့အခါတွင်လဲဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောပေးသည့်အတွက် အလွန်အဆင်ပြေသောBluetooth Hanset လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
DLB203 is Specially designed dual screen desktop mount that frees up space and allows positioning of your display for greater productivity.Height adjutsable for more comfortable viewing experience.Tilt &amp; swivel function for better viewing angle.Security ring stops accidental dropping. Neat and efficient cable management.Grommet or clamp basement is available.
White Single Switch
Low profile single switch with white finish. 1 gang internal switch, ideal for controlling 1 circuit.2way switches make it possible to control the same light from2locations.Suitable for Internal use.For your safety, electrical products must be installed in accordance with local building regulations.Suitable for Internal use. Light Centre မှ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မားပြီး အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးသော Wires,Cables,Breakers,Switches များနှင့် Lighting ပစ္စည်းများအားဈေးနှုန်းချိုသာစွာလက်လီလက်ကားရောင်းချပေးနေပါသည်။အိမ်သုံး၊စက်ရုံသုံး၊ရုံးသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို လူကြီးမင်းများစိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Classical TV Mount
Easy to use and install, the popular model PLB-33L is designed to fit any 37&#039;&#039;-70&quot; curved &amp; flat panel TVs up to 75kg/165lbs. This unit mounts in tilting position and tilts up toa10° to position the screen for an optimal viewing experience. Integrated bubble level is included for easy installation alignment MOK Trading မှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေသည့် Loctek brand products များဖြစ်သော Interactive TV Mount, Low profile TV Mount, Desktop Mount, Classical TV Mount, Ceiling Mount, DVD Stand, Cart Stand, Projector Stand, Flat Panel TV Brackets, Projector Brackets, Mobile Cart Stand, DVD Brackets နှင့် Monitor Desktop Brackets များကို ပစ္စည်းမှန်၊ဈေးမှန်ဖြင့် ဝယ်ယူသူများ စိတ်တိုင်းကျရောင်းချပေးနေသည့်အပြင် နည်းပညာအမြင့်မားဆုံးနှင့် အရည်အသွေးအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။.
Ruby Family 25 KVA Generator Sound Proof (မီးစက်)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များအတွက် ပူစရာမလိုဘူးနော်အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံး Ruby Family Sound Proof Diesel Generator တွေရှိပါတယ် စက်ရုံလုပ်ငန်းသုံး စက်ကြီးများသာမက ရုံးသုံး အလတ်စားများနဲ့ အိမ်သုံးအသေးစား များ ရှိပါတယ် ဒီဇယ် သုံးဖြစ်တာကြောင့် ရေရှည်ကုန်ကြမှုစရိတ်ကိုအထူးလျော့ချပေး ပါတယ် အိမ်သုံးလုပ်ငန်းသုံးရရှိနိုင်ပါသည် တစ်ခြားမီးစက်များလိုမဟုတ်ဘဲ အသံကျယ်လောင်မှုကိုလျော့ချထားမှုကြောင့်သုံးစွဲသူများ အကြိုက်တွေ့စေမှာအမှန်ပါတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်မသွားအောင် Ruby Family မှ တာဝန်ယူပါတယ်။
Luminaire LED Downlights
The Lumination™ RX Series LED downlights are the ideal retrofit solution for traditional downlight fixtures. They install in just minutes into most 6-inch and 8-inch rough-in frames while also bringingafresh look to the space. Unlike plug-in LED lamps, the RX downlight gives youanew power supply and 50,000 hour life rating, so that you won&#039;t have to worry about compatibility or maintenance issues with the original ballasts. Now also featuringaSelectable Driver Package which allows customers to manually switch from full power (1000lm) to lower power (650lm) with just the switch ofabutton. This affords unprecedented flexibility and reduces install risk by effectively having two lumen levels in one simple package. ရုံးခန်း၊ အစည်အဝေးခန်း၊ Hotel Lobby၊ ဧည့်ခန်းနှင့် အိပ်ခန်းများတွင် အလှဆင်တပ်ဆင်ကြပြီး High Quality ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးအတွက် စိတ်ချရပါသည်။ရုံးသုံး၊အိမ်သုံး၊ဟိုတယ်သုံး၊စက်ရုံသုံး Wires,Cabels,Switches နှင့် Lighting ထုတ်ကုန်များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာလက်လီလက်ကားရောင်းချပေးနေပါသည်။
Cart Stand PSF 321
This carts is great for schools, hotel, conference rooms, lobbies, hospitals, laboratories, office building and other locations. It can hold plasma, LCD, LED TVs&#039; size up to 65&quot; with weight up to 40kgs. Aluminium column comes witha6mm Glass shelf for DVD player or other device. At the rear of column isasteel shelf which can hold UPS, power socket and mainframe.Optional camera shelf accessory converts space intoavideoconference center.Locking wheels make moving your stand easy.Aluminium column.Cable to the TV is contained within the rear column.Comes with 6mm Glass shelf for DVD player or other device. MOK Trading မှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေသည့် Loctek brand products များဖြစ်သော Interactive TV Mount, Low profile TV Mount, Desktop Mount, Classical TV Mount, Ceiling Mount, DVD Stand, Cart Stand, Projector Stand, Flat Panel TV Brackets, Projector Brackets, Mobile Cart Stand, DVD Brackets နှင့် Monitor Desktop Brackets များကို ပစ္စည်းမှန်၊ဈေးမှန်ဖြင့် ဝယ်ယူသူများ စိတ်တိုင်းကျရောင်းချပေးနေသည့်အပြင် နည်းပညာအမြင့်မားဆုံးနှင့် အရည်အသွေးအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
Lite-Ace တံဆိပ် 12W LED အမျိုးအစားကို Hotel Lobby၊ ဧည့်ခန်းနှင့် အိပ်ခန်းများတွင် အလှဆင်တပ်ဆင်ကြပြီး High Quality ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးအတွက် စိတ်ချရပါသည်။ အဆိုပါ မီးလုံးကို Warm White Color (3000K), Cool-White Color (4000K) နှင့် Daylight Color (6000K) စသော အရောင်သုံးရောင်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ 3mm အထူရှိသော မှန်ပြားဖြင့် Cover လုပ်ထားသောကြောင့် မီးဖွင့်လိုက်သောအခါတွင် တမူထူးခြားလှပနေပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Changi-Light Myanmar ရဲ့ ဖုန်း 01-565117 ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
MHK Safe Cook (Digital Cooking Timer)
MHK Electronics မှ Digital Cooking Timer အပြင် Photo Switch, Safeguard အမျိုးမျိုး၊ ဖုန်းအားသွင်း၍ရသော ဆိုလာမီးအိမ်နှင့် Battery Repairing Kit များကို ချိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် လက်လီ၊လက်ကား ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
1/2.7” 2Megapixel progressive scan CMOS ,Support H.264&amp;MJPEG dual codec ,Max 25/[email protected](1920×1080) ,Smart Detection supported ,WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC ,Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) &amp; DMSS ,3.6mm fixed lens (6mm optional) ,Max. IR LEDs Length 40m ,IP67, PoE .
အဆိုပါ LED Strip Light အလှဆင်မီးကြိုးသည် High grade PVC နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ပါသည်။ LED Strip မီးကြိုးကို ဆာလဖျူရစ်အက်စစ်၊ Acetone၊ အမိုးနီးယား၊ Ethyl alchol ၊ တွင်းထွက်ရေနံ၊ တိရစ္ဆာန်အဆီ (သို့ မဟုတ်) ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီ အစရှိသောနေရာများတွင် ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပေါ်မည်ဆိုးသောကြောင့် တပ်ဆင်ခြင်းမပြုရပါ။ LED Strip မီးကြိုးကို အဖြူ၊အနီ၊အစိမ်း၊အပြာ၊အဝါ စသော အရောင်ငါးရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး အရှည်မှာ 5000mm x 10mm ရှိပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Changi-Light Myanmar Showroom သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Hoco J1 10000mah Linstar PowerBank
Hoco J1 10000mAh Linster Powerbank လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဈေးကွက်တွင်းရှိအများ စုသောpowerbank တွေဟာဆိုရင်သူရဲ့Capacity ကို 80%သာသုံးစွဲနိုင်ကြပြီးHoco J1 10000mah ကတော့100%အပြည့်အဝသုံးစွဲနိင်ဖို့ လစ်သီရမ်-ပိုမာလီ Cell Type ကိုအသုံးပြူထားပြီးအရောင်အားဖြင့် Navy Blue&amp; Dark Black ဆိုပြီး၂ရောင်လာပါသည်hoco ရဲ့ဆန်းသစ်တဲ့Product လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
Ruby Family 30 KVA Generator Sound Proof (မီးစက်)
AOC Monitor – i2778Vhe6 (27″)
AOC Anti-Blue Light Technology reduces shortwave blue light without dimming or distorting colors whereas other solutions use filters or software settings to reduce shortwave blue light, which results in dim/yellowish images. Patent pending Anti-Blue Light technology fine tunes the LED backlight light at the source to reduce eye-damaging shortwave blue light by over 90%. This monitor is excellent way to protect your eyes.
• L70 &gt; 60,000hrs • Industry leading efficacy up to 119 lm/W •5years full performance warranty • IP65 weather proof • Dimmable version with Microwave sensor optional • Dimmable with DALI optional • Several optics available for different applications • Multiple installations • Typical ROI less than2years • Saving up to 80% energy • No UV or IR, mercury free • Instant on/off • Free maintenance • Producing less heat than conventional high bays